Zvikonzero zvishanu zvaunofanira kuedza kuti uzive Mwari zvirinani | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Kurarama nehumwari Zvikonzero zvishanu Unofanirwa Kushingairira Kuziva Mwari Zvirinani
Nhasi tichange tichishanda nezvikonzero zvishanu zvaunofanirwa kushandira kuziva Mwari zvirinani. Hukama hwakaenzana naMwari ndicho chinhu chakanakisa chingamboitika kumutendi. Iko kukosha kwekusika kwedu kuve neikoinonia naMwari. Muiti wedenga nepasi anoda chimiro chisina kuvharirwa chehukama nevanhu vake. Hazvishamisi kuti Mwari achaburukira mumunda weEdeni munguva inotonhorera yemanheru kuti ataure naAdamu. Rudzi rwehukama pakati paMwari naAdamu rwaive rusina murevereri. Mwari Pachezvake achadzika obva ataura naAdamu. Ndiyo mhando yehukama Mwari yaanoda kuva nayo nemutendi wese.
Nekudaro, kana zvivi zvikaitika, hukama uhu hwakadzikiswa uye Mwari kuburikidza nerudo rwake uye Ngoni aifanira kutsvaga nzira iri nani yekudyidzana nemunhu. Izvo zvakatungamira mukuuya kwemweya mutsvene. Vaapositori vaishanda naKristu vaive nekusvikika kuna Kristu, kune imwe nhanho vaiziva Mwari zvirinani kupfuura chero ani zvake. MuApostora Pauro panguva yake, kunyangwe asina kusangana naKristu, zvakadaro, akasangana nekristu uye akanzwa zvakawanda nezvaKristu. Mupositora Pauro akadaro mubhuku ra VaFiripi 3:10 kuti ndimuzive iye uye nesimba rekumuka kwake uye nokuwadzana kwematambudziko ake, ndichifananidzwa nerufu rwake. Ruzivo rwaMwari haruperi, anozviratidza kumunhu zvichienderana nenhanho yenyota nenzara mumoyo wemunhu.
Kana isu tichiedza kuziva Mwari zvirinani, Iye anova anoonekera kwatiri uye isu tinosvika pakumuziva zviri nani. Kuziva Mwari zvirinani zvinoreva kuti hauzombove uri wega panguva yekushaiwa kana dambudziko. Kana ichi chisiri chikonzero chakakwana chekuti iwe ushande kuziva Mwari zvirinani, ngatitaurei zvimwe zvikonzero zvishanu:
Sezvambotaurwa, chikuru chikonzero nei uchifanira kushandira kuziva Mwari zvirinani kuvaka hukama hunogara naye. Mwari vanotaura nguva dzose, Vanoda kuteererwa nguva dzose. Asi kana pasina hukama hwakagara pakati pemunhu naMwari, zvinoita sekunge Mwari vanongotaura kamwechete mukati mechinguva.
Mweya waMwari unotaura nguva dzose. Anoda kutaura nesu nguva dzose. Kuve neikoinonia naMwari zvakafanana nekugara uchishinga online zuva rese. Iwe unoziva hauzombopotsa kubva pane zvese zvinonakidza online. Nekudaro, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge ukaita. Aya zvekare mashandiro anoita Mwari, kana iwe uine hukama hwakanaka naMwari, Anotaura newe nguva dzose.
Tinowana mhinduro nekukurumidza kumunamato
Nekuti Ndiye Musiki
Wakambozvibvunza here kuti mauto edenga aivepi Mwari paakasiya muzinda wake kumusoro kuti ataure naAdamu? Zvinoreva here kuti pakanga pasina munhu kudenga Mwari aigona kutaura naye waakasarudza kuuya pasi kuzosangana naAdamu? Chikonzero Mwari akasika munhu ndechekuti ave nekoinonia nemunhu. Hazvishamise kuti kana munhu akakundikana mubindu reEdeni, Mwari haana kumira ipapo. Akatuma mwanakomana wake mumwechete kufira pamuchinjikwa kuitira kuti ruponeso ruunzwe kuvanhu uye vanhu vagokomborerwa nechipo che mweya mutsvene.
Izvo Mwari zvavanoda hukama hwakaenzana naye uye ndosaka tichifanira kushingairira kumuziva zvirinani. Paunokomborerwa nechipo chemweya mutsvene nhasi, unotanga kukura mauri. Pamwe Mwari vanogona kunge vachikushanyira kamwe mumwedzi, zvisinei, Mwari anoda zvinopfuura izvozvo. Anoda kuti iwe uwedzere kusvika padanho rekuti Iye ave nekugona kusingarambike kwauri nguva dzose. Mwari anofunga nezvemunhu, ndosaka achivaka mhando yehukama nemunhu waasina kana neumwe akasikwa naIye.
Zvinotibatsira kukunda zvivi
Kuwedzera kuziva kwedu Mwari, kwakasimba mweya waMwari uri matiri. Uye rugwaro runoti kana simba raiye akamutsa Kristu kubva kuvakafa richigara mamuri, rinomutsa muviri wako unofa. Miviri yedu inofa inoda kumutswa ichipesana nezvivi neuipi. Mweya waMwari unotibatsira kukunda zvivi.
Panogara paine kukakavara pakati penyama nemweya. Hazvishamise kuti mupostori Pauro akachema zvinonzwika achikumbira rubatsiro kuti anoona zvichimuomera kuita zvinhu zvaari kuda kuita, asi zvine mutsindo ita zvinhu zvaasingade kuita. Asizve, kana mweya waMwari ukakwidziridzwa matiri, zvivi zvinokundwa nekuti mweya unotipa simba rekukunda madimikira enyama. Chinyorwa chinoti kune avo vanotungamirirwa nemweya waMwari vanonzi vana vaMwari.
Pane zvakawanda mukuedza kuziva Mwari zvirinani. Patinonamata, tinowana mhinduro inokurumidza kumunamato wedu. Tinozova padhuze naMwari kana tichiedza kumuziva zvirinani. Mwari anozviratidza nenzira yakaenzana nenyota yedu nenzara yedu kwaari. Kana tikaswedera padyo naMwari, izwi redu rinoonekwa zviri nyore panguva yekunamata uye tinowana mhinduro nekukurumidza kuchikumbiro chedu.
Tinofanira kushingairira kupedza kubva mukirasi yemucheche wechiKristu. Isu tichiita kuyedza kuziva Mwari zvirinani zvinotiisa mune iri nani nzvimbo yekukura pamweya. Simba rerima rinova mhandu yedu rinokura nekusvetuka zuva nezuva, hatigone kuramba tichinonoka. Patinovavarira kuziva Mwari zvirinani, zvinotibatsira kukura pamweya.
Kana tikakura pamweya, tinokwanisa kutsika-tsika rima nemabasa aro. Nekudaro, tinova kutya kune simba rerima chero kwatinowana isu. Mukristu wese anofanira kukura pamweya, zvikasadaro vanozotsikwa nesimba remuvengi. Chinyorwa chinoti mhandu yako haizorore, anofamba-famba seshumba inodzvova ichitsvaga wekudya. Hatifanire kuzvibvumira kupedzwa nemuvengi, tinofanira kukura uye kuedza kwedu kuziva Mwari zvirinani kutibatsira kukura pamweya.
Previous nyaya10 Ndima yeBhaibheri Haufanire Kukanganwa Paunenge Uchirwara
inoteveraMaitiro Ekuwana Zvemweya Kutungamira kwaMwari